खोपले कोरोना भाइरसको परिवर्तित रुपलाई कति असर गर्दछ? -खोपले कोरोना भाइरसको परिवर्तित रुपलाई कति असर गर्दछ? -
होमपेज / उज्यालो फोकस
खोपले कोरोना भाइरसको परिवर्तित रुपलाई कति असर गर्दछ?
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:०४ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । वुहानबाट डिसेम्बरमा जारी गरिएको कोरोना भाइरस विगत केहि महिनामा आफैंमा परिवर्तन आएको छ र यो अब विश्वव्यापी रूपमा नयाँ प्रकारका (भाइरसको तनाव) मा उदाउँदो र फैलिरहेको छ। हालसम्म भारतमा यो भाइरसका तीन प्रकारका पत्ता लागेका छन् – पहिलो प्रजाति चीनको वुहानबाट भएको हो, दोस्रो प्रजाति यूरोपको इटालीमा पाइन्छ र तेस्रो प्रजाति ईरानबाट। अन्वेषकहरूले भनेका छन कि कोविड १९ को संक्रमण संसारको धेरैजसो क्षेत्रहरुमा द्रुत रूपमा फैलिरहेको छ युरोपियन तनाव (विविधता) को हो र यो फेब्रुअरी महिनामा इटालीमा देखा परेको प्रजाति हो।
प्रख्यात पत्रिका न्यूजवीकमा लेख लेखिएको छ कि युरोपेली किसिमको कोरोना चीनको वुहानबाट उत्पन्न भएको भाइरस भन्दा बढी शक्तिशाली छ। तर अन्वेषकहरू भन्छन कि यसले यो प्रमाणित गर्दैन कि यूरोपियन विभिन्न किसिमका स्ट्रानबाट संक्रमण बढी घातक हुनेछ।
न्यूजवीकको लेख विज्ञान पत्रिका ‘सेल’ मा प्रकाशित अनुसन्धानमा आधारित छ। सेलमा प्रकाशित अनुसन्धानले यो पनि भन्यो कि भाइरसको नयाँ प्रजातिहरूको उदयले खोपको आविष्कारमा ठूलो असर पार्ने छैन।
भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषदले पनि भारतमा देखा पर्ने भाइरसका प्रजातिहरूबारे अनुसन्धानको कुरा गरेको छ। यो पनि भनिन्छ कि कोरोना भाइरसका विभिन्न प्रकारका उपस्थितिको अर्थ यो विकास भइरहेको होइन, यसले खोपको गुणस्तर कम गर्दछ।
आईसीएमआर डाक्टर रमण गंगाखेडकरले भनेका थिए “नयाँ प्रकारको भाइरसले खोपलाई बेवास्ता गर्ने छैन।” भाइरसका प्रजातिहरूको अनुसन्धानको बारेमा कुरा गर्दै संस्थानले भनेका छन कि यसले भारतमा संक्रमणको बेला भाइरसको तनावमा कुनै परिवर्तन आएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउछ।
आईसीएमआर भारतको जैव-चिकित्सा अनुसंधान र अन्य मामिलाहरूको अनुगमन एजेन्सी हो। वर्तमानमा, कोविड १, को उपचार सम्बन्धी नीतिहरू, अनुसन्धान, इत्यादि यसका द्वारा जारी गरिएका दिशानिर्देशहरू वा यसको मद्दतले मात्र तयार भइरहेको छ।
स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टिच्युटको एक अनुसन्धानका अनुसार जीरोपीय प्रजातिलाई G614 भनिन्छ, यसले D614 (भाइरसको उत्पत्ति चीनबाट) भन्दा १० गुणा बढी छिटो गर्न सक्छ तर अन्वेषकहरूले यो पनि विश्वास गरे कि अमेरिका जस्ता देशहरू पनि। यसको तीव्र प्रसारको कारण त्यहाँ रोकथामको अभाव हो।
यदि युरोपबाट अमेरिका जाने व्यक्तिको संख्या धेरै ठूलो छ भने त्यहाँ यस किसिमका भाइरसको फैलावटको कारण यो हुन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव चाँडै नै हुँदैछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनमा भाइरस संक्रमणको लागि आक्रामक हुँदै आएका छन्। धेरै भारतीय नेताहरूले हालसालै भाइरस र चीनको बारेमा बयान दिएका छन्।
हङकङबाट प्रकाशित भएको अखबार साउथ चाइना मोर्निंग पोस्टले एक रिपोर्टमा भनेको छ कि इटालीमा भाइरस फैलिरहेको छ, चीनसँगको उसको सम्बन्ध सीधै फेला परेन। उक्त अखबारले आफ्नो रिपोर्टमा इटालीको मिलानमा गरिएको अनुसन्धान उद्धृत गरेको छ। लोम्बार्डी क्षेत्रका 300 व्यक्तिको रगत नमूनाको आधारमा गरिएको जीनोम सिक्वेन्सिंग (डीएनए अन्वेषण) ले पत्ता लगायो कि त्यहाँ देखिएको ‘ट्रान्समिशन चेन’ सँग चीनसँग प्रत्यक्ष कुनै सम्बन्ध थिएन।
उक्त रिपोर्टले दाबी गर्यो कि जनवरीको अन्त्यमा इटालीले चीनबाट इटाली आउनेहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर डिसेम्बरमा मिलान र टुरिन नालाहरूको पानीमा पनि भाइरसको लक्षण देखियो। अखबारले इटालीको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थलाई उद्धृत गरेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानका डा। गार्गेया टेलकपल्ली भन्छन कि भाइरसको जीवन हुन्छ, त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो र यी परिवर्तन वा नयाँ प्रजातिहरू भौगोलिक र मौसमको अवस्थाका कारण पनि हुनसक्दछन्।
एनआरएन दुबई अध्यक्षकै अगाडि दलालबाट कुटिए पीडित नेपाली
पानीले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ, के भन्छन वैज्ञानीक ?
रहेनन्, जनताका डाक्टरसाहेव
संसारमा पहिलो पटक विमान उडाउने व्यक्ती रावण थिए, श्रीलंकाले ५ बर्षमा प्रमाणित गर्ने दाबी
कर्मचारीले मास्क लगाएको छ कि छैन भन्ने जानकारी दिने प्रविधिको विकास
यी ११ लक्षणबाट थाहा पानुहुनुहोस कि तपाईंलाई कोरोना छ कि छैन ?